Dating mazano. Professional Dater.
Last updated: Dec. 27 2017 | 3 Maminitsi verenga
Makore ose, mazana ezviuru zvevanhu vanoona vavo 'mutambo akakwana’ kuburikidza paIndaneti kufambidzana mabasa. Uye gore rimwe nerimwe mazana ezviuru mwoyo yavo zvakaitika. Imwe zvinokonzera kuti vaya vane zvinetso paIndaneti kudanana ndiyo chidzoke ari 'nyanzvi paIndaneti dater', izwi sezvaari nomumwe Online Dating Magazine kutsanangura munhu anoita zvakakomba nezvokuwana munhu, asi usina chinangwa kutora chero zuva kana ukama 'kuzvikoshesa’ nekuti rinotevera dies 'kungava nani.’
Kazhinji A nyanzvi paIndaneti dater ane nhatu kana kupfuura apa tsika:
> Kutaurirana vanhu vanopfuura vatanhatu panguva imwe.
> Nhengo nhatu kana kupfuura paIndaneti kufambidzana mabasa panguva imwe chete.
> Relists Profile mukati 24 maawa noukama kurambana.
> Anorega wandei kukurukurirana chete 'agumise’ kuti kuisa nguva kupinda itsva kukurukurirana.
> Achaongorora mashoko uye kudanana mabasa kakawanda pazuva.
> Nguva dzose anotenda kuti rinotevera dies 'kungava nani'.
> Kanoverengeka gore achava vanopfuura mumwe musi, nevanhu vakasiyana, akamisa pavhiki.
> Panguva chiratidzo chokutanga dambudziko iri zvinogona ukama, anorega zvinhu kugura kudzokera paIndaneti kufambidzana.
> Vangavanda Profile, asi hazvirevi kuidzima, apo zvishoma nezvishoma kufambidzana nomumwe munhu.
> Pavaidzoka kubva zuva, pakarepo achaongorora tsamba kuti mashoko matsva nevamwe.
nyanya, munhu haasi nokungwaririra vanoti 'Ndinoda kuva nyanzvi paIndaneti dater’ ipapo arutevere sezvo upenyu chinangwa. Hazvina chinhu inoita kuti somugumisiro wacho paIndaneti kufambidzana zvakaitika. Iye / iye anoona sei 'nyore’ ndiko kuwana zuva idzva uye kutaurwa kuti zviso zvitsva rakapotsa zuva. munhu asati kuuziva, iye / iye ari kutaura hafu dhazeni (kana kupfuura) vanhu panguva iyoyo. Kana musi hwakarongwa naye mumwe munhu kuchine matanhatu tarisiro vakamirira ari munhu Inbox kana / iye anodzokera kubva musi. ichi, mukudzosa, anotanga kuva subconscious mafungiro kuti rinotevera munhu angava 'nani,’ saka zviri nyore kusiya ukama kana kudanana ruzivo panguva chiratidzo yokutambudzika wokutanga pane kushanda kuburikidza matambudziko iwayo.
A nyanzvi paIndaneti dater kazhinji avanze Profile maringe deleting kana kupinda imwe chete kufambidzana ukama. asingafungi zvakakwana, munhu haasi zvechokwadi kupa yake 100% kuti ukama zvavakakutumidza afunga nyore vatize shure nyika yemichindwe.
Professional paIndaneti daters, pasina ndazviziva, vari kuva kunambwa vanhu vanouya neZvapupu munguva dzavo neboka ramakororo. Semuyenzaniso, nenyanzvi paIndaneti dater angave kunyora vanhu vanomwe panguva imwe, apo imwe tariro itsva zvinonakidza rinoratidza. Mukudzosa, ari nyanzvi paIndaneti dater achibvumira kutaurirana nemumwe (kana kupfuura) vamwe vanhu vanomwe kuti pakarepo kumisa, achisiya kuti munhu pasina mhinduro uye vachishamisika, 'Apo haana / iye Zvibvisike kuti?’ Rimwe dambudziko nyanzvi paIndaneti daters kuunza paIndaneti kudanana vasina kuzvipira kwechokwadi. Vangava zvitatu, zvimwe ukama mana kana gore. The Ukama vanowanzoremekedza pfupi uye nyanzvi paIndaneti dater une zuva idzva vakamiswa (nemunhu itsva / akasangana paIndaneti) mukati mazuva anoverengeka kurambana.
Munhu ane nhatu kana kupfuura miitiro nenyanzvi paIndaneti dater anogona asingadi kubvuma kuti iye / iye ari nyanzvi paIndaneti dater, asi kuita izvozvo danho rokutanga kuti kugadzirisa dambudziko. Other matanho kugadzirisa dambudziko vari:
> Zvakakwana kuidzima kwenyu Profile(S) kana kupinda mune ukama. Hapana kutarira shure, chete mberi.
> Isa pachako kuti ukama hwako chakasimba kushanda kuburikidza nematambudziko. Kushanda kuburikidza nyaya muukama ndizvo rinobatsira vanhu kukura. Achitiza hakusi mushonga.
> Kana kurega dzokukurukurirana munhu, regai kuzviita chando kweTurkey. Kanenge kutumira kuti munhu nounyoro kucherechedza kuti / iye anoziva nei. Munhu vachakuremekedza zvakawanda ichi.
> Find imwe paIndaneti kufambidzana basa kuti uchifarira uye omerera nayo. Iyi haisi mutambo kuona vangani vanhu vatsva unogona kutaura. Munhu wese iwe kukurukura munhu chaiyeiye ane kunzwa chaiye. Regai kuvatungamirira.
> Chete kukurukura vashoma vanhu panguva.
> Regai kuwira nemafungiro 'unotevera angava nani.’ pachinzvimbo, omerera munhu wava uye vanoziva kuti vari 'yakanakisisa'. Zvadaro zvifambe.
Professional paIndaneti daters nokusaziva kukuvadza vanhu vakawanda panguva kosi yavo 'ushingi'. Asi zvichida zviri kuipa ndechokuti nenyanzvi paIndaneti daters kukuvadza pachavo nokuti havana kudzidza kushanda kuburikidza ukama nyaya pave-refu ukama kubudirira. Luckily, nokutsunga, nyanzvi paIndaneti daters angachinja uye kana vakaisa zvakafanana zvikuru nezvemuchato ukama (sezvavakaita pamwe paIndaneti kufambidzana) ipapo ukama kazhinji ichichinja chiitiko chinoshamisa uye-kare. Uye kuti pave mumwe kubudirira Nyaya vanhu vaviri akasangana paIndaneti.